(L) မာရီယာကွန်နီကိုဗာ၊ နယူးယော့တိုင်းမ်စ် - သင်သည်အလွန်ချုပ်တည်းမှုရှိသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
(L) ကိုသင်ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်-Control နေမာရီယာ Konnikova ခြင်းအားဖြင့်, NY Times သတင်းစာ (2013)
By မာရီယာ KONNIKOVA
သင်တစ်ဦးမြေအောက်ရထားပလက်ဖောင်းရတဲ့အခါသင်ဘယျအရာရှိလျှင်ပြုကြ, သင်ကရှိပြီးသားလူတို့နှင့်အတူထုပ်ပိုးကြောင်းတွေ့မြင်? သင်ရထားစောင့်လူစု join ပါနဲ့, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းလှုပ်ခြင်းနှင့်သင်သွားဘယ်မှာရဖို့တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းရှာသလော
သင်ပထမဦးဆုံးလမ်းကြောင်းသို့သွားလျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းလူအစုအဝေးအချို့ရှိအချိန်ရထားဖူးနှင့်တအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်ဟုမပြုရဆိုလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ သငျသညျဒုတိယရှေးခယျြလျှင်, သင်ဆန့်ကျင်ဘက်နိဂုံးချုပ်ဖို့လာပါတယ်: ဒါဟာလူစည်ကားမယ့်သူကပြဿနာအချို့ကိုမျိုးရှိပါတယ်ဖွယ်ရှိင်ဒီတော့ရထားတစ်ဦးအနေဖြင့်ကြွလာတော်မူမမူ - သူသငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသိတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အုပ်စုခွဲခုတ်ဖြတ်။
ကျနော်တို့ Self-ထိန်းချုပ်မှုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဤဝေါဟာရများအတွက်ကြောင့်မမြင်မိပါဘူး - စောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်မတစ်ဦးနှီးနှောဆုံးဖြတ်ချက်။ ပိုကောင်းတဲ့, ယူဆရနှင့် - - နောက်ပိုင်းရွေးချယ်ဖို့, သင်အဲဒါကိုမှထွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ကြာသောအရာကိုရှိသည် Do ချက်ချင်းကျော်ဆုလာဘ်သျောမရ: တကယ်တော့ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန်စွမ်းရည်အစဉ်အလာ willpower ၏ပြဿနာအဖြစ်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတခုတှငျတှေ့မွငျခဲ့သ အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောတဦးတည်း? သငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံး၏ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက် brownie ကိုစှနျ့လှတျနိုငျသညျ, နောက်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေပမာဏသည်မျက်နှာသာအတွက်အဆင်သင့်ငွေသားအရှုံးမပေး? ချက်ချင်း option ကိုပူ၏, သင်ကခံစားရပါကအနံ့တစ်ခုကိုမြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်ရွေးချယ်မှုဝေးအေး၏, ဒါဟာအတော်လေးသလောက်အရောင်သို့မဟုတ်ပါဝါနှင့်အတူကပုံဖော်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများမှာကွာခြားချက်ပုံမှန်အား Dual-system ကို Trade-off အဖြစ်ရှုမြင်သည်တဦးတည်းလက်တွင်, သင် deliberative, ရောင်ပြန်, အေးမြသည့်စနစ်ရှိသည် ဖြစ်. , အခြားရက်နေ့တွင်, ထိုးထွင်းသိမြင်, reflex ပူစနစ်။ သငျသညျရှိ Self-ထိန်းချုပ်မှုနည်းပိတ်နောက်ထပ်နှင့်အနာဂတ် Cooler ဖြစ်လာသည်နှင့်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်ချက်ချင်းပစ္စုပ္ပန်ပေါက်နေသည်။ Brownie? yum ။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင်အဖြစ်မှန်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါသလဲ ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးနိုင်စွမ်းပိုလောလောလတ်လတ်ဖုတ်အားရစရာနှငျ့ရငျဆိုငျနေတဲ့ Dieter တူသောထက်လူစည်ကားရထားပလက်ဖောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရခရီးသည်များကဲ့သို့အမှန်တကယ်သည်အဘယ်သို့လျှင်? Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးကကျရှုံးခြင်း, တက္ကသိုလ် Pennsylvania ပြည်နယ်၏အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ယောသပ်သည်ဒဗလျူ Kable နှင့်ယောသပ်တီ McGuire အကြံပြု, အချိန်ရဲ့မသေချာမရေရာမှတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဤမျှလောက်ဟာကျရှုံးခြင်းမကျမည်အကြောင်း: ငါတို့သည်အခါမီးရထားအတော်လေးသေချာမသိရှိပါက အဘယ်ကြောင့်စောင့်ဆိုင်းရန်ဆက်လက်အတွက်အဖိုးတန်အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရှိရလိမ့်မည်နည်း
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအဘို့လုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်၏စိတ်ပညာနှင့် neuroscience အပေါ်လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသည်ခဲ့သူမစ္စတာ Kable, အမှန်တရားကတော့ဓာတ်ခွဲခန်းမှဆန့်ကျင်အဖြစ်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌, ကြှနျုပျတို့ရလိမ့်မယ်နီးပါးအဖြစ်သေချာမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုကြောင်းစောဒကတက်သည် ဆုလာဘ်ကတိထားတော်, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ကလာကြလိမ့်မည်သည့်အခါ၏။
"စစ်မှန်သောကမ္ဘာဖြစ်ရပ်များ၏အချိန်ကိုက်အမြဲဒီတော့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမရဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူနှင့်မစ္စတာ McGuire ရေးပါ။ "ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများပုံမှန်ဘတ်စ်ကားများ, အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုယ်အလေးချိန်များနှင့်သိသိသာသာယာယီမသေချာမရေရာအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်အခြားရလဒ်များအဘို့အစောင့်ပါ။ " တစ်ခါတလေအရာရာကျနော်တို့ကမျှော်လင့်ထားပဲရသောအခါလာပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အများအားဖြင့်တိဘတ်စ်ကားဖြိုဖျက်သို့မဟုတ် All-ပေမယ်-အချို့အလုပ် ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှတဆင့်ကျရောက်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သူတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုရည်မှန်းချက်ထားသောအခါ, ငါတို့မကြာခဏစိတ်တွင်တိကျသောအချိန်ဘောင်ရှိသည်: ငါတစ်ပါတ်တစ်ပေါင်ကိုဆုံးရှုံးမယ်; ယခု မှစ. တစ်လငါမဟုတ်တော့ကြောင်းစီးကရက်အဘို့မတရားသောရလိမ့်မယ်, ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ရထား 10 မိနစ်လာကြလိမ့်မည် (နှင့်ငါသည်ငါ၏ကာဗွန်ခြေရာကိုလျော့နည်းလာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူပြီးမှကျူးလွန်ပါတယ်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးခန့်မှန်းချက်ကိုချွတ်လျှင်သို့သော်ဘာဖြစ်သွားမလဲ အဆိုပါအချိန်ပိုမိုမျှော်မှန်းဆုလာဘ်မပါဘဲဖြတ်သန်း - က 20 မိနစ်နှင့်နေဆဲဘာမျှမဖြစ်မယ့်, ယခုတွင်ငါသည်တစ်ပါတ်နဲ့တစ်နှစ်ခွဲများအတွက် dieting နှင့်နေဆဲတူညီတဲ့အလေးချိန်ပါတယ် - ပိုမသေချာမရေရာအဆုံးဖြစ်လာသည်။ အစဉ်အမြဲငါငါ၏အကျိုးအရလိမ့်မည်နည်း အစဉ်အဆက်ကိုယ်အလေးချိန်? အစဉ်အဆက်ကြောင့်မိုရထားပေါ်တွင် get?
တက္ကသိုလ်မှမစ္စတာ Kable ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှ neuroscience ဓာတ်ခွဲခန်းများကကောက်ယူသစ်ကိုလေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးသည်နှင့်အညီ, စနစ်တကျနှင့်အတူစတင်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြမခံခဲ့ရတဲ့အချိန်ဘောင်မှတုန့်ပြန် - အမှန်ပင်တစ်ဆင်ခြင်တုံတရား - ဤအခြေအနေ၌, ထပေးခြင်းသဘာဝနိုင်ပါတယ် Pennsylvania ပြည်နယ်နှင့်ထုတ်ဝေ သိမှတ်ခံစားမှု နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း.
"အခြေအနေတွေအများကြီး, အခြေအနေများ၏ဖြစ်ကောင်းအများစုရှိပါတယ်, အစစ်အမှန်လောကရှိ," မစ္စတာ Kable "ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းအမှန်တကယ်အကျိုးကိုနောက်ထပ်ရတဲ့နှင့်ဝေးကွာကြောင်းခိုင်လုံသော cue သည်အဘယ်မှာရှိ။ " ပြောတယ်
မစ္စတာ Kable နှင့်မစ္စတာ McGuire နယူးဂျာစီပြည်နယ်များတွင်တစ်ဦးကုန်တိုက်များတွင်စျေးဝယ်တစ်စုပေါ်မှာဤယုတ္တိဗေဒစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ လူတို့သည်မိမိတို့ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အကြောင်းကိုထွက်သွား, ထိုသူအချို့တို့သည်သူတို့ $ 10 နှင့် $5အကြားလုပ်နိုင်သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦး 10 မိနစ်လေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခိုင်းတယ်။ လေ့လာမှုပါဝင်သူတစ်ဦးအဝါရောင်အလင်းဟာကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာပေါ်လာနှစ်ယောက်အရာတစျခုလုပျဖို့ရွေးချယ်နိုင်တွေ့မြင်မယ်လို့: "တဦးတည်းရာခိုင်နှုန်းယူမှတ်သား" 15 ဆင့်စောင့်ဆိုင်း "သို့မဟုတ်ဒုတိယ box ကိုရန် cursor ရွှေ့မှတ်သားတဲ့ box ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ mouse ကို cursor ထားပါ။ "ဘာကိုသူတို့မသိကြသူတို့ကပိုပိုက်ဆံ၏ဂတိကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်မယ်လို့ဘယ်လောက်ရှည်လျားခဲ့သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်အတော်လေးပုံမှန်ကြားကာလမှာပေးထားခဲ့ကြသည်။ အခြားသူတွေခုနှစ်, သို့သော်အချိန်ကိုက်ပိုပြီးမသေချာမရေရာဖြစ်ခဲ့သည်: အပိုရှည်သငျသညျငံ့လင့်လျက်, အပိုကြီးတဲ့သငျသညျစောငျ့မြျှောပေါ်မှာ right စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်အခွင့်အလမ်း။
သူတို့အစပိုင်းတွင်အတော်လေးစိတ်ရှည်ခဲ့လျှင်ပင် - သုတေသီပုံမှန်ကြားကာလမြင်လျှင်စျေးဝယ်ဇွဲနဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှုအလွန်မော်ဒယ်တူနေစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း, အပြောင်းအလဲမြန်ကြားကာလကိုမြင်လျှင်သူတွေကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပို. ပို. လျော့နည်းမြဲကြီးပွားသတည်း။ အကျိုးကိုအချိန်ကိုက်၏မသေချာမရေရာ ပို. ပို. ထကြွလွယ်သောကွညျ့ရှုအပြုအမူဆီသို့သူတို့ကိုတွန်းဖို့လုံလောက်တဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ကအစစကားတခွန်းကိုစမ်းသပ်မှုတွေခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဖို့ပိုမကြာခဏခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်။ သူတို့ကချက်ချင်းမယ့်အစားပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏသည်အံ့ဆဲဆဲခဲ့လျှင်ကြည့်ဖို့နည်းနည်းစောင့်ဆိုင်း၏, ထိုရာခိုင်နှုန်းရဖို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကရိုးရှင်းစွာစိတ်မရှည်ကြဘူး, မစ္စတာ McGuire နှင့်မစ္စတာ Kable ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအနာဂတ်များ၏ခန့်မှန်းရခက်ဖို့သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ဇွဲ၏တန်ဖိုးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုလေ့။ တစ်ခါတစ်ရံကစောင့်ဆိုင်းဖို့သဘာဝကျပါတယ်။ အခြားအချိန်များတွင်, လက်၌ငှက် ပတ်သက်. အလေးချိန်သဘောမျိုးလုပ်စတင်ခဲ့သည်။
"သင်ရောနှောဖို့အနာဂတ်မရေရာ add သောအခါ" မစ္စတာ Kable ကလုံးဝပြဿနာကိုပြောင်းလဲ "ထောက်ပြသည်။ အခုတော့စောင့်ဆိုင်းရန်သင့်စွမ်းရည်အကြောင်းကိုပဲမဟုတ်ပါဘူး။ မသေချာမရေရာမှုနှင့်အတူသင်စောင့်ဆိုင်းနေတာအခါ, သငျသညျပိုမိုနီးကပ်စွာရတဲ့နေကြောင်း, လူတိုင်းနက်ရှိုင်းသောပင်ကိုယ်ရဲ့နားလည်သဘောပေါက်, ပယ်ပါပဲ။ "အနာဂတ်ဒီတော့သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်, သင်တို့အပေါ်မှာပြောင်းလဲပစ်ပါမည်နည်း
တကယ်တော့ကြောင်းမစ္စတာ McGuire နှင့်မစ္စတာ Kable တွေ့ရှိခဲ့အတိအကျဘာတစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်ဖြစ်ပျက်: သင်ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းသကဲ့သို့သင်တို့ပိုမိုနီးကပ်စွာရမစဉ်းစားကြဘူး။ အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်။ တစ်ချောကလက် chip ကို cookie ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်သကြားလုံးဘား, သူတို့ရဲ့ preference ကိုပေါ် မူတည်. - ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့သူတို့တစ်ဦးထက်ပိုသောနှစ်လိုဖွယ်အနာဂတ်အကျိုးသည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာခန့်မှန်းရန်သင်တန်းသားများကိုတောင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို2ထံမှ 130 မိနစ် - သူ - တော့ဘူးချောင်းမြောင်းအချိန်ကြာကြာသူတို့စောင့်ဆိုင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်ဖို့စဉ်းစားထား: ကျော်နှင့်ကိုကျော်သူတို့ကအတူတူပါပဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"ဒီအခြေခံအယူအဆ" ဟုမစ္စတာ McGuire ကပြောပါတယ် "ဟုသူကစောင့်နေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထုတ်လုပ်သူစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သူအဆက်မပြတ် re-အကဲဖြတ်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ သင်ကတူညီတဲ့အကျိုးသည်စောင့်ဆိုင်းနေပေမယ့်သူကသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်အချိန်ကျမ်းပိုဒ်တစ် function ကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ "
, ကိုယ်အလေးချိန်တစ်မိုင်ပြေးသင်၏အချိန်တိုးတက်အောင်တစ်ဦးစံစမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်သင့်စန္ဒရားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေပေါ်တွင်သင်၏ရမှတ်တိုးတက်အောင်: တစ်စက္ကန့်စမ်းသပ်မှုမှာ Penn သုတေသီများအချိန်ကြောင်းအမြင်သငျသညျနေ့စဉျအပြုအမူနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါပြောင်းလဲသွားသလားဆိုတာကိုကြည့်။ နောက်တကြိမ်သူတို့အဲဒီမှာ get ချင်ပါတယ်သည်အထိပစ်မှတ်ရောက်ရှိမပါဘဲလွန်ပိုအချိန်ကလူထင်သည့်အချိန်ပိုမိုကျန်ရစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတုံ့ပြန်မှုဟာဆင်ခြင်တုံတရားနိဂုံးပိုင်း၏အတိအကျကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ hard ယုတ္တိဗေဒ - ဒါမှမဟုတ်အလွန်အနည်းဆုံး, ယုတ္တိပင်ကိုယ် - သင်တစ်ခုခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပိုပြီးအချိန်, အနီးကပ်လာသင်ကအောင်မြင်မှုရရှိရန်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ငါစန္ဒရားလေ့ကျင့်လျှင်, ငါတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ ငါနေ့တိုင်းပြေးလျှင်ငါ့အချိန်ပိုမြန်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကအားလုံးကို၏အလယ်တွင်ရောက်နေသည့်အခါဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့သောကြောင့်စိတ်ကြောင့်လမ်းမမြင်နိုင်ကြဘူး။ လွန် ပို. အချိန်, ထိုနောက်ထပ်လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုဆုချီးမြှင့်ကနေသလိုခံစားရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိအလုပ်လုပ်တယ်နှငျ့အခြို့သောအရာတို့ကိုအမှန်တကယ်ယူပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုရှည်လျား၏ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတာနဲ့တချို့နာမည်ကြီးစမ်းသပ်ချက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားကြည့်ဖို့စတင်ပါ။ ဖြစ်ကောင်း Self-ထိန်းချုပ်မှုရဲ့အကောင်းဆုံး-လူသိများဥပမာသည်အဘယ်အရာကိုစဉ်းစားပါ: 1960 နှစ်အရွယ်လက်ယာသူတို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ကြီးတစ်ခု marshmallow ဖမ်းဆုပ်မတိုင်မီအခြားအားရစရာဘို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတိုင်းတာသော 4s ထံမှ Walter Mischel ရဲ့အပြတ်အသတ်ကိုးကားအလုပ် - တစ်ဦး နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်၏ပညာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ပေါ်ပြူလာမဆိုဆွေးနွေးမှု, ၏၏ sine qua မဟုတ်သောကြောင်းလေ့လာမှု။
ဒါကြောင့်စောင့်ဆိုင်းရပ်တန့်သူသည်ဆိတ်ရိုးရှင်းစွာသူ treatless သွားကြဖို့ရှိသည်မယ်လို့အချိန်ပမာဏကို miscalculated ခဲ့ကွောငျးဖြစ်နိုင်မည်နည်း သူကတစ်ဦးထက်ပိုသောကွန်ကရစ်ခန့်မှန်းချက်ပေးထားခဲ့လျှင် - မူလလေ့လာမှုအတွက်အမြိုးသားအကိုသူတို့စောင့်နေလိမ့်မယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအတိအကျကိုပြောသည်ကြသည်မဟုတ် - သူချွတ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီမလဲ ဒါကယုတ္တိဗေဒသဘောအရလုပ်လိမ့်မယ် - သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနစတင်မစ္စတာ McGuire နှင့်မစ္စတာ Kable မှုတ်သွင်းသောအရာကိုတကယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ Kable သူမ၏ကိုယ်ပိုင် Self-ထိန်းချုပ်မှုသုတေသနဆောင်ရွက်ထားပြီးသူစိတ်ပညာရှင် Angela Duckworth, ကဲ့သို့တူညီသောဌာနအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ တဦးတည်းတွင်နေ့လည်စာစကားပြောဆိုမှုစဉ်အတွင်းမစ္စတာ Kable သူမသည် marshmallow ပါရာဒိုင်းအတွက်, သင်စမ်းသပ်ပြန်ကြွလာသည့်အခါမသိရထောက်ပြ, ငါ့ကိုသို့ပြောသည်။ "သင်ကဒုတိယ marshmallow ရတဲ့နေသည့်အခါသင်ကမသိရပါဘူး," Kable ကဆိုသည်။ ယာယီမသေချာမရေရာပုံသို့ဝင်သောရှိရာတစျခု - "ကောင်းပြီ, ယခုသင်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခွအေနရှိ" ။
တကယ်တော့အဲဒီအခြိနျ-based ယုတ္တိဗေဒသူစောင့်ဆိုင်းနိုင်စွမ်းသူအဖြစ် ", အချိန်အယူအဆတိကျမှန်ကန်မှုကို" ကဲ့သို့သောပေမယ်ဖို့ချောင်းမြောင်း၏အရှည်မှချည်ထားသောမခံခဲ့ရကြောင်းမှတ်ချက်ချသောအခါအစောပိုင်းအပေါ်မစ္စတာ Mischel ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်အကြံပြုခဲ့သည် လိုနောက်ပိုင်းတွင် ထည့်ပါ။
အလားတူဆင်ခြင်ခြင်းမသေချာမရေရာကိုယ်နှိုက်ကအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ခဲ့ရှိမရှိမေးမြန်းဖို့ Celeste Kidd, Rochester တက္ကသိုလ်မှတစ်သိမြင်စိတ်ပညာရှင်, ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ - တစ်ဦးမယ့်အစားအသုံးပြုသော crayons ၏အနုပညာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ set ကို - နှင့်သုတေသီစိတ်မချရသက်သေပြထားတဲ့အတွက်တဦးတည်း - သူရှိခြင်းမပြန်လာနဲ့တောင်းပန်မယ်လို့တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောသုတေသနပညာရှင်တစ်ဦးကတိထားတော်ဆုလာဘ်နှင့်အတူကလေးများထောက်ပံ့တဦးတည်းသော: မစ္စ Kidd ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်မျိုး created ပိုကောင်းတဲ့ဆုလာဘ်ဂတိတော်င်။
အဆိုပါကလေးများထို့နောက်သူတို့နှစ်ဦးကို marshmallows ဘို့စောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ယခုတဦးတည်းကိုစားနိုင်ရှိရာရိုးရာ marshmallow လေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်၏ကြိုတင်ယုံကြည်စိတ်ချရအဆုံးအဖြတ်ခဲ့: တစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသုတေသီနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖူးသောသူတို့အား 12 စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်စိတ်မချရအခြေအနေရှိသူများ, သုံးမိနစ်ခန့်ပျမ်းမျှစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ သားသမီးတို့, မစ္စ Kidd ကောက်ချက်ချ, ပို. ဆင်ခြင်တုံတရားကျနော်တို့အဘို့ထိုသူတို့ကရက်ဒစ်ပေးထက်ဖြစ်ကြသည်။
အထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်တို့တွင်အလွန်သွေးဆောင်င်သောအရာအစုရှယ်ယာမှာဖွင့်ကားအဘယ်သို့ဘယ်မှာဒါခေါ်ပူအခြေအနေများအတွက် - ၏သင်တန်း, ဒီအဘယ်သူအားမျှအမှန်တကယ် Self-ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စရပ်များရပ်ဆိုလိုသည်။ ကျွန်မဥပမာ, အဟောင်းကို marshmallow ပါရာဒိုင်းပဲဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်။ ငါသိပ်အဖြူရောင် fluffy အရာများအတွက်ဂရုစိုက်ဖူးပါဘူး။ အကြှနျုပျမူကားများ၏ရှေ့မှောက်၌ (ထိုစံချိန်များအတွက် Levain) ငါ့အကြိုက်ဆုံးကိတ်မုန့်နေတဲ့လောလောလတ်လတ်ဖုတ် oatmeal စဗစျြသီးခြောကျ cookie ကိုနေရာနှင့်အနာဂတ် svelteness မရှိစိတ္တဇဂတိတော်ကိုတစ်ခုကွာခြားချက်စေဖွယ်ရှိသည်။
သာအချိန်မသေချာမရေရာခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးနိုင်စွမ်းအကြားနောက်ခံဆက်ဆံရေးမျိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်နေစဉ်တွင်, ငါအတိအကျအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရှိခဲ့ပါတယ်လျှင်ငါ့အလေးချိန်အပေါ်ရှိသည်မယ်လို့ငါကလွယ်ကူ cookie ကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်ရှာတွေ့မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်စေမယ်လို့ - အခါ , အတိအကျ, ထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုလာလိမ့်မယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အငြင်းအခုံများအပိုင်း" ဟုမစ္စတာ Kable ကဆိုပါတယ် "ဟုအဆိုပါခက်ခဲပြဿနာများ, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အစားအသောက်များတွင်ပြဿနာများနှင့်ဘတ်စ်ကားကိုစောင့်ဆိုင်းဒါမှမဟုတ်မြေအောက်ရထားစောင့်ဆိုင်းနဲ့တူသက်ဆိုင်တဲ့ပုံပေါ်သောပြဿနာများ, အကြားတစ်ဦးနောက်ခံတူရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ကျနော်တို့အချိန်မသေချာမရေရာဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ် "ဒါဟာတကယ်တော့ဆင်ခြေစေရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ် - ။ တဦးတည်း cookie ကိုတစ်ဦးခြားနားအောင်လုပ်ပေးမည်မဟုတ် - ကြောင်းမကြာမီအလုံအလောက်က hard, အချိန်-based အထောက်အထားအလငျး၌ တကယ်တော့မည်။
ဒါကြောင့်ဒီလက်တွေ့ကျကျစကားပြောအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး "ကျွန်မဆေးလိပ်ဖြတ်ငါ့အသက်ကို၏ 10 နှစ်ကြာ" ဟုမစ္စတာ Kable ကဆိုသည်။ "ငါသည်အစားအသောက်များတွင်ဖို့ကြိုးစားနေလာမည့် 10 နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ ဤလုပ်ငန်းကို။ ငါ့ထံသို့အလွန်အမင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ် "ထိုအခါသူကပိုမိုနီးကပ်သည်သူ၏ပန်းတိုင်သူ့ကိုငါသက်ရောက်စေမည်ထင်ပါသနည်း "ငါကအထောကျအကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိပါတယ်" ဟုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "ကျွန်မအပြည့်အဝခက်ခဲ Self-ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာများအဖြေတစ်ခု trickier ကြောင်းဝန်ခံပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါမျှော်လင့်မိပါတယ်။ "
ကျနော်တို့ရောက်ရှိဖို့မထင်နိုင်ပါတယ်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူအပြင်းအထန်ကိုသူတို့အဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အမြင်သောအသိပညာ - မဟုတျဘဲအခြို့သောမွေးရာပါချို့ယွင်းချက် - အပြစ်တင်ဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်အနာဂတ်မှာပိုပြီးအောင်မြင်မှုရရန်ကျွန်တော်တို့ကို enable ပေမည်။ အဲဒီအစား willpower တစ်ဦးပျက်ကွက်မှုအတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုတက်ရိုက်နှက်၏, ငါတို့အစားပိုကောင်း get-go, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မဘို့ရာခန့်င့်တာဝန်များ၏လက်တွေ့ဘဝကိုဖမ်းယူကြောင်းလက်တွေ့ကျကျ, ကွန်ကရစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြအချိန်ရည်မှန်းချက်များ setting ထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မျှော်လင့်ချက်များကိုအချိန်အဆညှိသင်ယူခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကရိုးရှင်းတဲ့ reframing အပြုအမူများအတွက်အလွန်မှန်ကန်ဂယက်ရိုက်ရှိနိုငျတယျ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီနှင့်နယူးယောက်မြို့ကိုသင်နောက်တစ်နေ့မီးရထားဘို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရုံအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအချက်ပြကြောင်း၎င်းတို့၏မြေအောက်ရထားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်များမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမစ္စတာ Kable ထောက်ပြ, ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမသေချာမရေရာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ "သင်မရှိတော့ပါသငျသညျစောင့်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်သင့်အစည်းအဝေးအတွက်နှောင်းပိုင်းကဖြစ်လိမ့်မည့်တက္ကစီဖမ်းပြီးသင့်ပါတယ်အချိန်ရှိသည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "သင် cue မျိုးရှိသည့်အခါကသန့်စင်သောအသိပညာ၏အမှုဖွင့်သည့်အခါသငျသညျ, မရေရာမှုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အခါ, ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ဝေးပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာသည်။ "
အဘယ် cue မျိုးကိုပိုပြီးခက်ခဲသည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနကောအသို့နည်း "ငါသည်တူညီမူအရအရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်တယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ သင်ကတစ်ဦးနှစ်ဦး-to-လေးလအတွင်းထက်နှစ်ရက်သတ္တပတ်-or-တွေဆီကနေအခွအေနဖြစ်မည်အကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါလျှင် - - သင်မယ်လို့သင်ကကိုယ်အလေးချိန်နှင့်သင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်စမသေချာမရေရာထည့်သွင်းရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်ကိုအတိအကျဘယ်လောက်ရှည်လျားနားလည်လိုလျှင် ပစ္စုပ္ပန်တခဏအတွင်း ပို. နိုင်စွမ်းကြောင်း brownie ခုခံ၏ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာရထားချောင်းမြောင်းအချိန်ကိုသင်များ၏ရှေ့မှောက်၌နှိမ့်ချ tick မြင်နေသကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်အားလုံးမှာ platform ပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမနိမိတ်လက္ခဏာရှိခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးသင်ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းအမြဲအသတ်မရှိစောင့်ဆိုင်းမဆိုလိုပါနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့အချိန်ဘောင်အတွက်ရှေ့ပြေး Investing - သစ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်သူတွေကိုအချိန်ဘောင်ကိုထိန်းညှိဖို့သင်ယူခြင်း - ကျွန်တော်တို့ကိုသိပ်မကြာမီရောက်လာကြောင်းဆုလာဘ်များဆွဲခုခံတွန်းလှန်ကူညီလိမ့်မည်။ အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိထိန်းချုပ်ခြင်းအခြားသောစကားများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စုပ္ပန်၌အကြှနျုပျတို့၏အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ကကူညီလိမ့်မည်။
မာရီယာ Konnikova အဆိုပါဖြစ်ပါသည် စာရေးသူ "ကြိုးကိုင်သူ။ : ဘယ်လိုရှားလော့ဟုမျးလိုပဲစဉ်းစားပါရန်" ၏